Fanaan - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani waa maqaal ku saabsan guud ahaan Fanaanka. Qoraalo kale fiiri fanka Soomaalida, fanaan Soomaali, suugaan, hees.
Boga "heesaa" iyo "fanaanad" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Fanaan (; ) waa heesaa, jilaa, iyo qof muusigga yaqaan. Fanaanka waxaa badanaa loogu yeeraa, qof xirfaddiisa shaqo heesaha iyo muusikada tahay. Haweeneyda waxaa loogu yeeraa "fanaanad", ninkana "fanaan". Guud ahaan, fanaanku waa qofka ku codeeya hees, gabay, geeraar, tix, iyo tiraab. Waxaa jira shakhsiyaad gaar ah oo leh xirfad ka baxsan heesida, sida dadka halabuurka leh (abwaan), majaajilada fiican leh, ciyaarta qoob-ka-ciyaarka yaqaana (dance), ama garaaci kara qalabka muusiga (sida kabanka, durbaanka, turunboda iwm).
Fannaaniinta Soomaaliyeed ee caanka ah aad bay u badan yihiin rag iyo dumarba; haddaynnu dhawr ka xusno fannaaniintii hore ee waaweynaa waxa ka mid ah:
Xaliima Khaliif Magool
Hibo Maxamed Hudoon (Hibo Nuura)
Cabdi Tahliil Warsame (Tahliil)
Cali Naaji Sacad
Qamar Maxamed Xuseen
C.Qadir Macalin Jubba
Shimaali Axmed Shimaali
Axmed Tifow Khamiis
Xareedo Ismaaciil Duniyo
Cusmaan C/kariim Gacanlow.
Hogaanka Bahda Fanka Soomaaliyeed
Sharaxaad badan iyo faahfaahin fanaaniinta Soomaaliya, fadlan fiiri Fanaaniinta Soomaaliya.
Fanaanka Xareedo Ismaaciil Duniyo.
Bahda fanka ku luuqaysa iyo ku heesta luuqada af-Soomaaliga aad ayay u badan, kuwaasi oo ka soo baxay meelo kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan. Sidoo kale, maanta waxaa jira tiro aad u badan oo fanaaniin ah oo ku nool dhamaan qaaradaha dunida, kuwaasi oo soo saara heeso cusub iyo kuwo la cusboonaysiinayoba. Jadwalka hoos ku qoran waxaanu ku soo bandhigeynaa qaar ka mid ah fanaaniinta sida fiican looga yaqaano dalka gudahiisa iyo dibadiisaba.
Xareedo ismaaciil duniyo fanaanad qaran hooyadii fanka ilaahy naxariistii janno haka waraabiyee , waxay ahayd fanaanad loogu soo hirto hidaha fanka iyo hanuuniyaha bulshada run u sheega madaxda dalka, waxay kale oo ay ahyd fanaanad ku sifowday waddaniyada iyada iyo AUN Saynab xaaji ali baxsan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanaan&oldid=227823"